iPhone 7 mu rose goridhe inoonekwa muvhidhiyo padyo ne iPhone 6s yemuvara wakafanana | IPhone nhau
Iyo iPhone 7 mu rose goridhe inoonekwa muvhidhiyo padyo neiyo iPhone 6s yeiyo vara
Sezvo chirevo chichienda, "kana rwizi ruchirira, mvura inotakura." Zvinorehwa neshoko iri ndezvekuti kana runyerekupe rukatenderera nechisimba, chimwe chinhu chine kana chichava chaicho. Panyaya yekugadzirwa kweiyo iPhone 7 uye mamwe maitiro ayo, tinogona kutaura kuti kupfuura rwizi isu tiri kutaura nezvegungwa kana gungwa, uye ndezvekuti nhasi a vhidhiyo ye iPhone 7 yakakwira goridhe uchienzaniswa neiyo iPhone 6s yeimwe vara.
Vhidhiyo inotevera haitaridze chero chinhu chatisina kuona mune kumwe kudonha. Muchokwadi, iyo imwechete svikiro iyo yakagovana vhidhiyo iyi yave zvakare iri mukutarisira kuburitsa akati wandei mafoto einotevera Apple smartphone. Ehe, pane akatiwandei zvinhu zvandinoona zvinonakidza, kutanga ne kusavapo kwe "S" izvo zvatakaona mune kumwe kudonha. Kunyangwe pasina chinoita kuti tifunge kuti iyi ndiyo chaiyo iPhone 7 uye kwete matatu atakaona neakambotaurwa "S", achiwedzera tsamba iya pa iPhone yakaburitswa mushure meiyo iPhone 6s, yekutanga kuisa iyi nyowani nyowani, zvinoita kunge vane pfungwa dzakawandisa.
Vhidhiyo yeiyo iPhone 7 mu rose goridhe
Chimwe chinhu chandinoona chinonakidza uye chinoita kuti ndifunge kuti vhidhiyo iyi ndeyechokwadi havaratidze iyo iPhone kubva kumberi. Ini ndinozviona zvichidadisa kuti kuwanda kunodonha kunoratidzika kunge kwakavimbika hakuratidze iyo iPhone 7 kumberi, sekunge paive nechinhu chitsva, kumwe kushamisika.
Kune zvese zvimwe zvinhu, iyo iPhone 7 mune ino vhidhiyo yeinopfuura kwehafu yeminiti inoratidza izvo zvatakaziva kwemwedzi: hapana chiteshi chefoni 3.5mm, kamera yakakura uye yakawanda kumucheto, mitsara yeiyo antenna chete kumusoro uye pasi peashure uye a mutauri wechipiri, ichi chiri chitsva chazvino uno. Sekureva kweOnLeaks, Apple yanga ichiedza zvishandiso zviviri, imwe ine mutauri uye imwe nemaviri, uye yapedzisira yafunga kuvhura iyo ine ma speaker maviri. Uye ndezvekuti, kana rwizi ruchirira ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Iyo iPhone 7 mu rose goridhe inoonekwa muvhidhiyo padyo neiyo iPhone 6s yeiyo vara
Ini ndinofunga havaratidze iyo iPhone kumberi nekuti hapana chaicho chitsva chekudzidzisa, zvichave zvakafanana neiyo yapfuura kana neimwe shanduko diki muchinzvimbo chema sensors. Kunyangwe ini ndaishuva kuti wanga uchitaura chokwadi uye paine chakashamisa, hehehe.
Zvinotaridza sekuti isu tatova takanyatsosimbisa kuti iyo iPhone nyowani ichave sei, kuona kana kuvuza kubva kuApple Watch 2 kuri kutotanga kuoneka.Ndanga ndine chivimbo chekuti vaizozvipa pamwe chete neiyo iPhone 7, asi vachiona kuti panguva ino hapana kudonha ... bhizinesi rakaipa.
Mhoro Keko. Ndakagara ndichifunga kuti kubuda kuri chikamu chekushambadzira, ndiko kuti, ndiye Apple anoronga zvese. Kana iwe uchifunga nezvazvo, isu hatina kuona chero chinhu kubva kuApple Watch isati yaziviswa, kungoita runyerekupe (kwemakore, kunyangwe pamberi pesmartwatch yekutanga yeSamsung) kuti kwaiuya. Ini ndinotaura izvi nekuti zvinogona kusauya gore rino, asi zvinogona kunge zviri kukona uye ivo havana kubvumidza chero chinhu kubuda. Tichaona.
Carlos Hidalgo Jaquez akadaro
Iko iro iphone 7 rinotaridzika zvakanaka, saka ini handitende mumakuhwa kana kutambisa nguva kupedzisa kuverenga kana kuona runyerekupe mavhidhiyo, kana vachinge vazvizivisa ndinonyatso tenda zvese!
Pindura Carlos Hidalgo Jaquez
Apple inobatsira kuvhara iyo hombe torrent saiti inonzi Kickass Torrents
Facebook Messenger inodarika bhiriyoni vanoshandisa pamwedzi